Sawirro:-Dukumiintiyo Been Abuur Ah Iyo Qalab Oo Lagu Soo Bandhigay Muqdisho – Hornafrik Media Network
Taliska Ciidanka Hoggaanka Ilaalinta Canshuuraha iyo dhaqaalaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa Maanta Magaalada Muqdisho kusoo Bandhigay Dukumiintiyo been abuur ah iyo Eedeysanayaal ku shaqeynayay.
Munaasabadda lagu soo Bandhigayay Qalabka loo isticmaalo Dukumiintiyada Been abuurka ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Daahir,Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyada Xukuumadda,Saraakiil Ciidan iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda.
Taliyaha Ciidanka Hoggaanka ilaalinta Canshuuraha iyo dhaqaalaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Cabdullaahi Xasan Bariise oo Munaasabadda ka hadlay ayaa waxaa uu sheegay in howlgal laga sameeyay Muqdisho lagu soo qabtay Qalabka lagu sameeyo Baasaboorada ay bixis Hay’adda socdaalka dowlada,Dukumiintiyada dhulalka dowladda Hoose,Dukumiintiyo Caafimaad iyo Shahaadooyin kale.
Sidoo kale Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa waxaa uu amaan u jeediyay Ciidankii Booliska ahaa ee soo qabtay Dukumiintiyada been abuurka iyo Raggii ku shaqeysanayay,isla markaana waxaa uu dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dadejiyo dhameystirka arrimaha la xiriirka Kiiskan.
Ugu dambeyntii Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa waxaa uu tilmaamay in Dukumiintiyada been abuurka ee la soo qabtay Wasaaradahii ku shaqada lahaa ay jiraan ayna shaqeeyaan,isla markaana waxaa uu sheegay in aan loo dul-qaadan doonin dadka sida sharci darrada u sameeya arrimaaan oo kale.
Mid ka mid ah xarumaha degmooyinka G/Banaadir oo korantadii laga jartay